Mụtakwuo banyere onye anyị bụ, otu inwere ike isi kpọtụrụ anyị na otu anyị si ahazi data nkeonwe na amụma nzuzo anyị.
Nkwenye gị metụtara ngalaba ndị a: www.papapearsaga.co
Ọnọdụ gị ugbu a: No consent given. Jikwaa nkwenye gị.
Gịnị bụ kuki ?
Kuki bụ obere faịlụ ederede eji eji echekwa obere ozi. Echekwara kuki ndị ahụ na draịva gị na ngwa gị wee webụsaịtị ahụ na ihe nchọgharị gị. Kuki ndị a na-enyere anyị aka ime ka ebe nrụọrụ weebụ rụọ ọrụ nke ọma, mee ka ebe nrụọrụ weebụ dị nchebe, nye ahụmịhe ọrụ ka mma, ma ghọta otu weebụsaịtị si arụ ọrụ na iji nyochaa ihe na-arụ ọrụ yana ebe ọchọrọ ndozi.
Kedu ka anyị si eji kuki ?
Preferences: Kuki ndị a na-enyere anyị aka ịchekwaa mwube gị na mmasị nchọgharị ka mmasị asụsụ, ka ị nwee ahụmịhe kachasị mma ma dị mma na ọbịbịa ga-abịa na weebụsaịtị..
Kedụ ka m ga - esi chikwa kuki mmasị ?
Kwesịrị ikpebi ịgbanwe mmasị gị ka oge na-aga site na nyocha gị, ị nwere ike pịa na “Nzuzo & Iwu kuki” taabụ na ihuenyo gị. Nke a ga-egosipụta ọkwa nkwenye ọzọ na-enyere gị aka ịgbanwe mmasị gị ma ọ bụ wepu nkwenye gị kpamkpam.